I-Oxytocin igxininisa ukuxhalabisa, ivuselela imisipha, iyanciphisa intlungu kwaye ijongene nokunikezelwa ngempumelelo. Siza kufunda kabanzi malunga nalo. I-Oxytocin yiyona hormone ebalulekileyo yothando. Ukuthetha ngale nto, uMichel Auden uzama ukuchazela kubaphulaphuli bakhe ukubaluleka kokukhulelwa, ukubeletha kunye nokuphila ubomi kunye nomntwana. IHormone oxytocin, izizathu zokubonakala-isihloko sesicatshulwa.
I-Oxytocin yaqale yaqatshelwa ekuqaleni kwekhulu lama-20, xa i-English neuroscientist uHenry Dale ibonisa ukuba "into ethile" kwi-hypothalamus ibangelwa ukuphambana kwezidumbu zesisu sekati ekhulelwe. Into entsha inikwe igama layo ngokudibanisa amagama amabini aseGrisi - "ngokukhawuleza" nangokuthi "ukuzalwa." Kamva, uDale waba ngumdla weNobel, kwaye i-oxytocin yaba yinto engaphezu kwe "hormone ekhulelwe." Iingcali zenzululwazi ziye zafumanisa ukuba i-oxytocin ayikho nje kwisibeletho, kodwa nakwintliziyo, kwintliziyo, kwindlela yokugaya. Iqondo le-oxytocin landa ngokukhawuleza ngexesha le-orgasm, ekuncediseni ukuthutha i-sperm kwiqanda. I-Oxytocin ifihliwe ngexesha lokusikwa, ukuxinzelela uxhala, ukunciphisa intlungu.
Ukukhululeka okukhulu kwe-oxytocin kwenzeka ngexesha lokunikezelwa. Njengoko u-Auden uthi. ukuba ukuzalwa kungokwemvelo, ke lona wesifazane ufumana ubuninzi bomlingo kwimpilo yakhe. Ukwazi ngale nto, abamama banesibindi, kwaye bayavuya ngokuzala. Ukukhululwa kwe-hormone kubangelwa ngumntwana esiswini. Kubonakala sengathi unikela umqondiso malunga nokuqala kokubeletha. Ngexesha elifanayo, ubuchule be-crumb ngokwazo ukuvelisa i-oxytocin kufakiwe. Ngombulelo kwihomoni yothando, i-placenta iyazalwa, kunye nokubunjwa kobuthi bomama kunye nomoya wokunamathisela. Kuvela ukuba i-oxytocin iyimfuneko kwaye iyimfuneko phantse kuzo zonke iindawo zobomi. UMichel Auden ubiza i-oxytocin "ihomoni ehlaziyiweyo." Kutheni, kuvela ukuba imilingo okanye i-orgasm ngexesha lokubeleka (abantu abaninzi beva ngako, kodwa ukuba ngaba umntu uyayibona), kubalulekile ukugcina iimeko ezininzi: I-Oxytocin ixhomekeke kwizinto zangaphandle.
♦ Ngokufanelekileyo, indawo yomhlaba kufuneka ifudumele kakhulu, ithule kwaye ingabi lula. Izinto ezinjengokubanda, ukukhanya okukhanyayo, umculo omculo okanye amazwi akhupha umkhiqizo ogqithiseleyo we-adrenaline kwaye yenza i-oxytocin nzima.
♦ I-Oxytocin ayithandi isihlwele esikhulu sabantu. Ngaphandle kwezizwe zakuqala apho kungekho zicalulo zesondo kunye neengcamango zokuziphatha, njengentlalo ephucukileyo, imibhangqwana ethatha umhlalaphantsi ibe yindawo okanye indawo ekhethekileyo yokukhulelwa nokubeletha, njengokungathi uyayazi kwangaphambili malunga neziganeko ze-oxytocin. Abanye abantu basenokholo lokuba umsebenzi oyintloko wombelethisi kukukhusela indawo yomhlaba, ukuqhuba umkhombe ngaphandle kweendwendwe ezingabamenywanga zivela kumfazi.
♦ U-Oxytocin uphuthukisiwe ngakumbi kubasetyhini abaye bakwazi ukuphumla, bekhululekile okwesikhashana kwiingqondo zabo, iidridi zezifundo. U-Auden ukholelwa ukuba ukuya kwinqanaba elingazi kakuhle liqinisekisa ukuzalwa okulungileyo ngaphandle kwe-anesthesia. Iziyobisi ziza kuthatha indawo ye-cocktail ye-hormone, ibalulekileyo ebalulekileyo yinto ye-oxytocin. Ngokutsho kogqirha, ukubeleka phambi koogqirha abangaqhelekanga ekugqokeni iingubo kunye neemaski, ngaphantsi kokukhanya okuphazamisayo kwimizila yokukhangela, kuninzi umsebenzi ongenakwenzeka njengokuba ubuza indoda kwindawo kawonkewonke ukuba iqoke umdaka ukuze ihlalutye, ilungise umzimba wayo ngamacangca kwindawo enye kwaye idibanise zonke iintlobo zeziveki.
Kwiimeko xa umzimba wokubeletha ungenzi i-hormone yothando, ithathelwa indawo ye-oxytocin yokufakelwa. I-Synthocinone okanye i-pituitary ijojowe ukwenzela ukuba ulwaphulo lube lukhulu kakhulu. U-Michel Oden uyaqiniseka ukuba "ukungalingani kwamangqamuzana", xa i-oxytocin isweleka, ayikho nto: umzimba wesifazane udala ngokusesikweni ukudala nokuzala abantwana. ugqirha ukhombisa ukukhawulezisa inkqubo ngokuncedisa i-oxytocin engumsebenzi? Zama ukuqala ukutshintsha iimeko zokusingqongileyo: kuba kwindawo ethile ekhoneni elithulileyo, landela ukuphefumla okucokisekileyo, ukubetha isisu sakho nokuthetha Uza kubona: xa uxolo, uzakufumana ukuzithemba ngamakhono akho, uloyiko luya kupheka, kwaye yonke into iya kwenzeka kumama nomntwana ozayo! I-oxytocin yokufakelwa yendalo ihluke kwindalo yokuba ayifikeleli kwimiphumo yengqondo kwaye ayichaphazeli ukuziphatha kwethu Ngamanye amazwi, akusiyo ihomoni yothando, kodwa isishukumisi esilula sezitho zomzimba zesisu.
I-Oxytocin ikhuthaza ukuqaliswa ngokuphumelelayo kweectation kwaye iqinisekisa ukunyamezela nokuphuza ixesha elide. I-Schematically ibukeka kanje: emva kokunikezelwa kwemvelo, umama uthatha umntwana ezandleni zakhe, uyifake esifubeni sakhe, ukhupha i-droplet ye colostrum, i-placenta iyazalwa. Oku kulandelelwaniswa kucaciswe ngendalo ngokwayo. Kwixesha elizayo, ekulileni, umntwana olambileyo, izinga le-oxytocin kumama landa. Kwaye kwindlela yokondla, kungekhona nje ukuvuselelwa kweengcambu ezenzekayo, kodwa kwakhona ukukhululwa kwayo yonke i-oxytocin efanayo, engena ubisi, ize ifike emzimbeni. Ngaloo ndlela, ukunika umntwana ubisi, lo mfazi ufumana ngokuphindaphindiweyo umlingo wothando: kuba luzolile, luvule, luyinqweneleka. Nangona kunjalo, abanye oomama bayakhalaza ngokungabikho kobisi. U-Oden ubonisa ukuba usebenzisa iiluleko ezilula, ezigxile kwixesha elidlulileyo. Ngethuba lokutya, unina nomntwana kufuneka bathathe umhlalaphantsi "emgodini" - igumbi elincinci elinokukhanya, ukuze kungabikho nto ebenza baphambuke kule nkqubo ebalulekileyo. Khangela amehlo e-crumb. Chukumisa iipenki ezimnandi, amahlombe ... kwaye wena ngokwakho awuboni ukuba ubisi luya kuvela njani. Into ephambili kukukholelwa kumandla othando! Ungathetha ngokungapheli ngommangaliso we-oxytocin. Musa ukuzicima kunye nabathandekayo bakho be "hormone yothando"! Ngubani, ukuba engunina, unako ukunika abanye le ntliziyo?
Ukulala ngokuqhelekileyo kwabasetyhini abakhulelweyo
Ukuzivocavoca kwabasetyhini abakhulelweyo ekhaya
Ingozi yokukhipha isisu: izizathu, iimpawu, unyango
Iingcamango eziyingozi malunga nokukhulelwa
Uthando olungagqithwanga: ukukhangela inzuzo kwiimeko ezixakekileyo
Imbali yunifomu yesikolo
UKsenia Sobchak kunye noMaxim Vitorgan: ibali lomthandane, uthando
Amaqanda aqhekezayo kwi-pastry
Ubonakalisa ebomini bethu: "kutheni na?"
Ubusuku busuku, iingubo zangaphantsi
Luphi usuku lo-Athlete ngo-2015? Iingcamango zeskripthi kunye nokuvuyiswa ngeli holide
Yintoni engcono: ukuziva udidekile okanye ukuyeka ukuvakalelwa?
Izizathu zengqondo zokukrexeza